ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် နစ်ဆန်းလာတီအိုများ | နစ်ဆန်းလာတီအို ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Pearl Gold Nissan Latio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl White Nissan Latio 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Nissan Latio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...
Black Nissan Latio 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl White Nissan Latio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Pearl Gold Nissan Latio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenge...
Silver Nissan Latio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အသံစ...
silver Nissan Latio 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အ...
White Nissan Latio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pass...
နစ်ဆန်း လာတီအို များ
နစ်ဆန်း ကား ဘရန်များဟာ ဒုတိယ ဈေးကားဈေးကွက် အနေနဲ့ လိုက်ပါလျက်ရှိပြီး နစ်ဆန်း နာမည်ကြီး ကားတွေဟာ ကမ္ဘာ မှာ နာမည်ရှိပေမဲ့လို့ ပြည်တွင်း သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ သုံးစွဲမူ နည်းနေပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် နစ်ဆန်း လာတီအိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်းလာတီအိုဟာ မိသားစုစီးကားတွေထက်မှာ တစ်ဆင့်ပိုပြီး သေးငယ်တဲ့ တံခါး လေးပေါက် ဆီဒန်ကားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အစီးနည်းပြီး အနည်းအကျဉ်းသာ တွေ့နိင်ပါတယ်။ လူသိနည်းတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ ပုံစံက တိုယိုတာ ထဲက ဘယ်လ်တာ ကားနဲ့ ဆင်ပြီး ကားရှေ့ခေါင်းက နစ်ဆန်း တို့ရဲ့ ကား အမျိုးအစားတွေအတိုင်း ကြံခိုင်တဲ့ ပုံပေါက်ပြီး အနောက်ပိုင်းကလည်း ဇိမ်ခံ ဆလွန်ကားတွေနဲ့ ဆင်သွားပြီး လှပလျက်ရှိပါတယ်။ အတွင်းခန်းကလည်း တီတာ လာတီအိုနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ ပုံစံက လုံးဝ တူတူပါပဲ ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ နစ်ဆန်း မိသားစုစီးကား ဖြစ်တဲ့ တီတာ ဆီဒန်အတွက် နစ်ဆန်း တီတာ လာတီအိုလို့ နာမည်စပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန် မားကတ်အတွက် လာတီအိုဆိုတဲ့ နာမည်ကို ၂၀၁၁ မှာ စပေးခဲ့ပါတယ်။နစ်ဆန်း လာတီအို ဟာ တီတာ လာတီအိုထက် ပိုပြီး သေးကာ ပြောင်းလဲထားတဲ့ နာမည်အောက်မှာ နိင်ငံတကာကို ကားအမျိုးအစားတစ်ခု အဖြစ် ရောင်းဖို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်. အခြား နာမည်ကွဲတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နစ်ဆန်း ဆန်နီ၊ နစ်ဆန်း အဲမယ်ရာ စသည့်ဖြင့် ခေါ်ကြပါတယ်။ နစ်ဆန်း တီတာ လာတီအို ကို ပထမဆုံး မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ နစ်ဆန်း တီတာ ရဲ့ ဆီဒန် ဗားရှင်းအဖြစ် ဂျပန်မှာ ဈေးကွက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခြားနိင်ငံတွေမှာ လည်း ဖြန့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နစ်ဆန်း လာတီအိုကို စဖြန့်တာက ၂၀၀၅ မှာပါ။ ထို နစ်ဆန်း လာတီအိုမှာ မော်ဒယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ၂၀၁၂ ထဲက မော်ဒယ် မှာတွေနိုင်ပါတယ်။
အင်ဂျင်က ၁၂၀၀ စစီ နဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ တို့ကဲ့သို့ မော်ဒယ် နှစ်မျိုးပဲလာပါတယ်။ ၁၂၀၀ စီစီမှာ ပြည်တွင်းတွင် အသုံးများပြီး ဓာတ်ဆီ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅၀၀ စီစီမှာတော့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါး (၄) ပေါက် ဆီဒန်ဖြစ်ပြီး ဆီဒန်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အရှေ့ အင်ဂျင်၊ အေ၇ှ့ဘီး ယက်၊ ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း တီတာနဲ့ မတူတာက အင်ဂျင်တွေက ကွာသွာပါတယ်။ တီတာက ၁၈၀၀ စီစီထိလာပြီး အင်ဂျင်တွေ ပိုကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ (၆) ချက် မန်နျူးယယ်တွေ ပါပါသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းမှာ တီဗီ အော်ရီ ဂျင်နယ်ပါလာတဲ့ ဂရိတ်တွေ ရှိသလို နဂိုမပါတာကို ပြန်ပြီး ထည့်လို့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မော်ဒယ်အမြင့် ကားတွေမှာ ပါရှိပြီး ၂၀၁၃ မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ လာတီအို အိတ်ခ်ျ ဂရိတ်တွင် တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းက ကား ဒိုင်ခွက်တွေနဲ့ အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများ ပြောင်းပြီး ဆန်းသစ်သွားပါတယ်။
နစ်ဆန်း လာတီအိုတွေဟာ တံခါး လေးပေါက် ဆီဒန်ကားတွေထဲမှာ ပါဝင်ပြီး လူ(၅) ယောက်စီးကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း လာတီအိုကားတွေဟာ ဆီဒန်ကား အငယ်စားကားလေးတွေ ဖြစ်ပြီး အရင် နစ်ဆန်း တီတာနေရာမှာ ပြန်လည် နာမည် အသုံးပြုထားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ကနေ စထွက်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ပုံစံ စသိပ်ကြီးကွာခြားမှုတော့ မရှိပါဘူး။ တိုယိုတာ ဆီဒန်ကားတွေထဲက ဘယ်တာကားတွေနဲ့ အနည်းငယ်ဆင်မတူပေမဲ့လို့ ရုပ်ကွဲပါတယ်။ အတွင်းဖက် ကား ဒတ်ရ်ှဘုတ်တွေကို အနည်းငယ် လုံးဝိုင်းထားပြီး အပြင်ဖက် ဒီဇိုင်းနဲ့ တူညီစေထားပါတယ်။ တီဗီတွေလည်း ပါရှိပါတယ်။ အတွင်းဖက် အနောက် ထိုင်ခုံတွေကို အရောင် နှစ်ရောင်စပ်အနေနဲ့ အထူးတလည်း အလှဆင်ထားပြီး နောက်မှီ ခေါင်းအုပ်တွေလည်း ပါရှိပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ဈေးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ကားဂရိတ်ပေါ်မှုတည်ပြီး ဈေးနှုန်း ကျပ်သိန်း ၇၀ကနေ ကျပ်သိန်း ၁၈၀ ၊ ၁၉၀ လောက် ဈေးနှုန်းပေါက်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းဈေးဆို မော်ဒယ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထုတ်တွေကို ရနိုင်ပြီး ၂၀၁၂ ထုတ်တွေကိုပါ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင် ဆီစား သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားနဲ့လာတာမို့ ကြိုက်နှစ်သူတို့ ၀ယ်ယူနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံက တစ်အားကြီး ကွာခြားသွားခြင်းမရှိတာမို့ ပြည်တွင်း အသုံးပြုမူကို သိပ်မထင်ရှား စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အရမ်းကြီး နာမည် မရှိပါဘူး။ ဒီဇယ်ကတော့ ၁.၅ လီတာမှာပဲလာတာမို့ ဓာတ်ဆီကိုသာ အခွန် သက်သက်သာသာဆောင်ပြီး ၀ယ်ယူ သုံးစွဲကြပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၁၂ ဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ် ရှိတဲ့ လာတီအိုတွေကို ပိုတွေ့ရပါတယ်။ ပုံစံက ပြောင်းသွားပြီး နောက်မျိုးဆက် တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ အတွက်ပါ။ ဈေးကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကို ၁၆၀ သိန်းကနေ ၂၀၀ နီးပါး အထိ ကားရဲ့ ကောင်းမွန် သစ်လွင်မူ ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးအမျိုးမျိုး ရှိနေကြပါတယ်။ ၂၀၀၈ မော်ဒယ်၊ ၂၀၀၇ မော်ဒယ်၊ ၂၀၀၉ မော်ဒယ် စတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို လည်းတွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်နှစ် အနည်းငယ် အောက်ကို နိမ့်သွားတဲ့အတွက် ကျပ် သိန်း ၁၀၀ အထိလည်း ဆင်ပြီး ဈေးခေါ်နေကြတာ ရှိပါတယ်။